Jamaahiirta Chelsea Oo Xogtii Ay Sugayeen Laga Siiyay Mudada Uu Goolhaye Mendy Dhaawaca Ku Maqnaan Doono & Haddii Ay Markale Kepa Arki Doonaan - Gool24.Net
Jamaahiirta Chelsea Oo Xogtii Ay Sugayeen Laga Siiyay Mudada Uu Goolhaye Mendy Dhaawaca Ku Maqnaan Doono & Haddii Ay Markale Kepa Arki Doonaan
October 10, 2020 Apdihakem Omer Adam
Goolhayaha ah saxeexa cusub ee kooxda Chelsea ee Edouar Mendy ayaa xog cusub laga soo sheegayaa mudada uu garoomada ka maqnaan doono xilli uu sabab dhaawac uga soo baxay xulkiisa Senegal ee kulamada caalamiga ah ciyaaraya.
28 sano jirkan ayaa ku dhaawacmay isaga oo tababar la samaynaya xulka Senegal kahor kulankii ay xalay la ciyaareen dhigooda Morroco.
Sida uu sheegayo wargeyska The Athletic, goolhayaha 22-ka Milyan ee Pound ugu soo wareegay Chelsea ayaa ku niyadsan in dhaawaciisu uusan ahaan doonin mid dheer oo uu kaliya laba toddobaad garoomada kaga maqnaan doono.
Walow uu dhaawaca Mendy yahay mid aan halis badnayn haddana Frank Lampard ayaa ku qasbanaan doona inuu kulanka Southampton markale ku ciyaari doono goolhayaha xaalada adag ku jira ee Kepa amaba 39 sano jirka Willy Caballero.
Dhibaatadan dhaawac ayaa ah mid Blues ku imanaysa xilli uu Mendy qaab wanaagsan ku bilawday waayihiisa ciyaareed ee kooxdaas isla markaana kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League ah ee uu kahor tagay Crystal Palace shabaq nadiif ah ku baxay.
Goolhayihii hore ee kooxda Rennes ayaa u muuqda mid seegi doona kulanka 17-ka bisha ee Southampton balse isha ku haya inuu taam u noqdo ciyaarta furitaanka Champions League ee ay Sevilla la leeyihiin.
Ugu dambayn, Kepa oo shaxda kooxda laga saaray kulankii ay Chelsea bar-bardhaca 3-3 ah lasoo gashay West Browmich Albion kaddib qaladaad waaweyn oo uu sameeyay ayaa shabaqiisa ilaashaday kulankii uu xulka qaranka Spain kahor tagay dhigiisa Portugal.